အကြောင်းမူကား Phrase '' DS '' ရပ်ကဘာလဲပါသလား
အင်တာနက်ကို & ကွန်ယက် အခြေခံ
by ရှင်ပေါလု Gil
DS ဖိုရမ်များ, လူမှုရေးကွန်ယက်များ, အီးမေးလ်နှင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများအပေါ်အသုံးပြုရန်တီထွင်သောအင်တာနက်ဘန်းစကား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
DS လေ့ "ချစ်လှစွာသောသား" သို့မဟုတ်အတိုကောက် "Darling သား။ " သူတို့၏သားအကြောင်းကိုအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်သောအခါမိဘများကအသုံးပြုတစ်ဦးချစ်ခင်အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာများပါဝင်သည်:
အကြှနျုပျ၏ DS ယခုအပတ်မြို့သို့ကြွလာခြင်းဖြစ်သည်။
အကြှနျုပျ၏ DS ရုံသစ်တစ်ခုစက်ဘီးတယ်, သူသည်ဒါမင်္ဂလာရှိ၏။
DS လည်းအွန်လိုင်းပြောဆိုမှုများမှာ "ချစ်လှစွာသောအစ်မ" ဆိုလိုရန်အသုံးပြုခဲ့ပေမယ့်အများကြီးလျော့နည်းမကြာခဏထက်ထားပါတယ် "ချစ်လှစွာသောသား။ " ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဆက်စပ်နှင့်ပေးပို့သူမှန်ကန်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။
DW ( ချစ်ခင်ရပါသောဇနီး )
DD ( ချစ်ခင်ရပါသောသတို့သမီး )
DH ( ချစ်ခင်ရပါသောခင်ပွန်း )
BFF ( အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေများ, ထာဝစဉ် )
DS, အခြားအင်တာနက်အတိုကောက်ကဲ့သို့မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများအကြားပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာသားများနှင့်ပေါ့ပေါ့မက်ဆေ့ခ်ျအတွက်သုံးစွဲဖို့ကောင်းပါတယ်။ ရှင်းလင်းပြတ်သား၏မျက်နှာကို ထောက်. ကွာမဆိုကြင်နာ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အတိုကောက်အသုံးပြုခြင်းမှနေပါ။
တချို့ကအင်တာနက်အတိုကောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောပြီဘာသာစကားသို့ကူးဖိတ်ပါပြီ။ သင်တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်သူမ၏ BFF တစ်ခုသို့မဟုတ်မေမေစကားအတွက်သူမ DD အဖြစ်သူမ၏သမီးကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြထားခြင်းစကားကိုနားထောငျနိုငျသညျ။ ဤရွေ့ကားအတိုကောက်များနှင့်အခြားသူများပြောပြီဘာသာစကားမှာ LOL (အသံကျယ်ထွက်ရယ်မော) နှင့်လုလင်ပျို (ဘုရား, ငါ၏ oh) ပူးပေါင်းပါပွီ။ DS လေ့စကားပြောဘာသာစကားတွင်ကြားသိသည်မဟုတ်။
တစ်ကွန်ယက် Gateway မှာဆိုတာဘာလဲ
IPv4 ဆိုတာဘာလဲ IPv6? အဘယ်ကြောင့်ဒီအအရေးကြီးလား?
Windows ကို Host ကဖိုင်တွေကိုဘာတွေလဲ?
SAN နှင့် NAS ကြားကွာခြားချက်များဖို့ In-Depth လမ်းညွှန်
ကျေးဇူးတုံ့ပြန်အရောင်စာမျက်နှာများ9ဆိုဒ်များ
သင်ကသင့်ရဲ့စတီရီယိုစနစ်တစ် subwoofer ချိတ်ဆက်ပါနိုင်သလားဘယ်လို
Google Chrome ကိုအတွက်တစ်ဦးချင်း Browser ကိုတဘ်အသံတိတ်လုပ်နည်း
ကို Canon PowerShot A2200 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဗီဒီယိုများ Watch နှင့် Twitch အပေါ်နယူးသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ Chat
CFG နှင့် config file ဘာတွေလဲ?
LinkedIn တို့ဘယ်လို Up ကို Sign နှင့်ကိုယ်ရေးဖိုင်ဖန်တီး
Windows Vista ကအတူပါဝငျအားကစားပြိုင်ပွဲ
Myxer ဖုန်းမြည်သံက iPhone App ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ဆန်းစစ်ခြင်း: ရော့ခ် Candy, Xbox 360 Controller
ဆန်းစစ်ခြင်း: Kinivo BTH240 Bluetooth နားကြပ်
အားလုံးအချိန် 25 အကောင်းဆုံးက iPhone အားကစားပြိုင်ပွဲ
Sony က HDR-HC1 HDV တီဗွီကင်မရာ - ကုန်ပစ္စည်းကို Preview
SSL ကို & SSH ကိုအဘယ်သို့သောအကြောင်းအရာရပ်ပါသလား?
အဆိုပါ Wii U Console အမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
အကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက်နှင့်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှု Apps ကပ
Tasker: ဒါဟာဒါဟာအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို & ဆိုတာဘာလဲ
Push ကိုအသိပေးချက်များဘာတွေလဲ? ထိုအဘယ်သို့ငါသူတို့ကိုသုံးပါသလား?